Ranona mananasy sy kanelina : Mampitony vanintaolana manaintaina
Azo atao tsara ny mampitony ny aretin’ny vanintaolana amin’ny alalan’ireo fanafody sy akora natoraly amboarina ao an-trano. Ity akora natoraly iray ity dia mampitony tanteraka ny fanaintainan’ny hozatra sy ny vanin-taolana noho ny voka-tsoa entin’ireo akora mandrafitra azy.
· Tantely 1sk
· Kanelina ½ sk
· “Flocons d’avoines” 1 tasy
· Mananasy voatetika 2 tasy
· Ranom-boasary 1 tasy
· “Amandes” manta 40g
· Rano 240ml
· Andrahoina ao anaty rano mandritra ny minitra maromaro ny ‘flocons d’avoines” ary avela hangatsiaka.
· Rehefa mangatsika dia ampiana ireo akora ambiny rehetra ary alefa ao anaty “mixeur” .
· Potserina anatin’ny “mixeur” mandrapahazo akora marihitra sy mitovy loko tsara.
· Misotro 2 vera amin’ity zava-pisotro ity mandritra ny tontolo andro iray ka ny 1 vera dia sotroina vao maraina.
· Sotroina isan’andro mandritra ny 15 andro ary ho hita avy hatrany ny fiasany.
Ireo voka-tsoa entin’ny akora tsirairay
· Ny kanelina dia mampitony ny fanaintainan’ny hozatra sy ny vanintaolana. Ankoatra izay dia miaro amin’ny mety ho fiforonan’ny “infection” ao anatin’ny vatana ihany koa izy ity.
· Mampitony ny fanaintainana ihany koa ny mananasy ary misoroka ny aretin’ny hozatra.
· Manan-karena rano sy vitamina C kosa ny voasary ka manampy amin’ny famokarana proteina, izay isan’ny tena manamafy ny vanintaolana.